IMIFANEKISO EMITSHA IBONISA U-EMMA CORRIN NJENGO-PRINCESS DIANA KWI 'CROWN' - IINDABA
Imifanekiso emitsha ibonisa uEmma Corrin njengeNkosazana uDiana 'kwisithsaba'
INetflix ityhile ividiyo entsha kaGillian Anderson njenge-Nkulumbuso yase-Bhritane u-Margaret Thatcher no-Emma Corrin njengo-Princess Diana ngaphambi kokukhutshwa kweXesha le-4 le-Crown ngo-Novemba 15.
Kumfanekiso omnye, uAnderson, 52, ubonakala edlala ibhulukhwe yokuqubha ngelixa emi kwizinyuko ze10 Downing St., ikomkhulu labasemagunyeni e-UK.
Imifanekiso eyahlukeneyo ibonisa uCorrin, oneminyaka engama-24, enxibe ii-nines njengo-Di, njengesixa sepaparazzi esihlalweni sobukhosi solutsha. Enye into eyahlukileyo nangona kunjalo kunye ne-co-star uJosh O'Connor, i-30, njengoko iNkosana uCharles ityhila imodeli isibini esitsha esihamba kwikhaphethi epinki ejikelezwe zii-shutterbugs.
Imelissa mack kunye neeryan myers
INetflix yahlekisa ngeXesha lesi-4 eliza kuba yinkomo, okuthetha ukuba kukho ubungqongqo phambili ebhotwe - njengoko abalandeli kunye neeAnglophiles bazi kakuhle. Utshintsho luyeza. umhla weshumi elinesihlanu kuNovemba, usasazo olukhulu lwetwitter .
Isithsaba sinyathela amanzi amnandi, njengoko uGirl Diana Spencer sele eza kufakwa kusapho lwasebukhosini. Imbali edlulileyo iqinisekisile ukuba esi sesibini sathintela iinyikima eKensington Palace, kunye noCharles noDiana ubudlelwane obubhalwe kakuhle obabusisiphithiphithi msinyane kunokungaphili kwakhe ngo-1997.
Umboniso wokuqala wahlekisa ngokufika kukaDiana kwakhona ngo-Agasti, emva kokuba uCorrin ebonwe ngoJanuwari, ezotywe isinitsha sasebukhosini asithandayo.
Iimuvi ezinje ngothando nezilo
U-Hairstylist u-Sam McKnight, u-stylist ongumntu oyintombazana u-Princess Diana iminyaka esixhenxe de kwaba kukungabikho kobomi, waphinda wenza i 'do kwi Corrin kumdlalo we Netflix.
rick kunye nodaka chromecast
Yaziva ingumnqa, uMcKnight - owaqala uphawu lwentengiso lwentengiso kaDiana ukwehla kwesivuno ngo1990 - wacebisa iBritish Vogue, kunye naye ekuqaleni wabuza ukuthatha indawo yokuphinda enze iinwele zeklayenti yakhe yangaphambili.
Ukunyaniseka, uEmma usebenzisana noDiana kwakamsinya kunokuba ndadibana naye, ke ndaziva ndiyakha, wathetha ngaye. Sithathe imifanekiso yemifanekiso kaDiana [kweloo xesha] kwaye senza ngokungathandekiyo.
Izigaba: Amazon-Prime Hulu Iwiki
ngu-damian hurley gay
Ibhola ye-lucille isindise uhambo lweenkwenkwezi
Ixesha lesiporho 1 isiqendu 5
abalinganiswa abafileyo abahamba phambili
othunyelwe ekhaya ngelizwi ngokuhlwanje
Iindleko kwi-4 kaJulayi